ခမည်းတော်ဘုရားသခင် - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် ဘုရားသခင်ဦးခေါင်း၏ ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး၊ မူလအစမရှိသော၊ သားတော်သည် ထာဝရကာလမတိုင်မီ မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သားတော်အားဖြင့် ထာဝစဉ်ကြွလာတော်မူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သားတော်အားဖြင့် မြင်နိုင်သမျှ မမြင်နိုင်သော အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ခမည်းတော်သည် သားတော်ကို ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာ စေလွှတ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသစ်ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများအဖြစ် လက်ခံခြင်းအတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ပေးတော်မူ၏။ (ဂျိုဟန် 1,1.၁၄၊ ၁၈; ရောမ ၁5,6; ကောလောသဲမြို့ 1,15စာ-၄၆; ယော 3,16; 14,26; 15,26; ရောမ 8,14စာ-၁၇; တမန်တော် ၁7,28).
ခရစ်ယာန်များအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မူအခြေခံယုံကြည်ချက်မှာဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်းဖြစ်သည်။ "ဘုရားသခင်" အားဖြင့် - ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မပါဘဲ၊ နောက်ထပ်ထပ်ဆောင်းထပ်ဆောင်းခြင်းမရှိဘဲ - ကျွန်ုပ်တို့သည်သမ္မာကျမ်းစာ၏ဘုရားသခင်ကိုဆိုလိုသည်။ အရာအားလုံးကိုဖန်တီးပြီး၊ ငါတို့နှင့်နီးစပ်သူ၊ ငါတို့လုပ်သည်နှင့်နီးသည်၊ ပြုတော်မူခြင်းနှင့်ငါတို့ကိုသူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်အတူထာကမ်းလှမ်း။
ဘုရားသခင်ကိုလုံး ၀ နားလည်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အစပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်အသိပညာကို အခြေခံ၍ စုဆောင်းထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်သူ၏ရုပ်ပုံ၏အခြေခံအင်္ဂါရပ်များကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးဘုရားသခင်နှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၌သူလုပ်ဆောင်သောအရာများကို ဦး စွာထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ ယုံကြည်သူအသစ်တစ် ဦး သည်အထူးသဖြင့်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်ဘုရားသခင်၏အရည်အသွေးများကိုအာရုံစိုက်ကြပါစို့။
ကာလကြာရှည်စွာ ယုံကြည်သူများအပါအဝင် လူများစွာသည် ဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်း အထောက်အထားကို လိုချင်ကြသည်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကို ကျေနပ်စေမယ့် ဘုရားသခင်ရဲ့ သက်သေတွေ မရှိပါဘူး။ သက်သေအထောက်အထားထက် အခြေအနေအရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ပြောဆိုခြင်းသည် ပိုကောင်းပေမည်။ အထောက်အထားများသည် ဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်းနှင့် ကိုယ်တော်၏အနှစ်သာရသည် ကိုယ်တော်နှင့်ပတ်သက်သော သမ္မာကျမ်းစာပြောဆိုရာများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား သေချာစေသည်။ ဘုရားသခင်သည် လုတ္တရမြို့၌ တပါးအမျိုးသားတို့အား ပေါလုကို “သက်သေခံခြင်းမရှိဘဲ စွန့်ပစ်တော်မမူ” ကြောင်း လုတ္တရမြို့၌ ဖော်ပြခဲ့သည် (တမန်တော် ၁4,17) မိမိကိုယ်ကို သက်သေခံခြင်း - ၎င်းတွင် အဘယ်အရာပါဝင်သနည်း။
ဆာလံ ၁9,1 steht: ကောင်းကင်ဘုံသည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ဘော်ပြတော်မူ၏။ ၌ ရောမ 1,20 [ခေါ်သည်-
ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရသည့်အကြောင်းပြချက်များအရတစ်စုံတစ်ခုသည်ကမ္ဘာမြေကြီး၊ နေနှင့်ကြယ်များကို၎င်းတို့အားအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖန်တီးထားကြောင်းဖော်ပြသည်။ သိပ္ပံပညာအရစကြာ ၀ osာသည်ကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေသည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်များ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် - ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။
ဖန်ဆင်းခြင်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေများ၏အမိန့်လက္ခဏာများကိုပြသသည်။ အကယ်၍ အရာဝတ္ထု၏အခြေခံဂုဏ်သတ္တိများသည်အနည်းဆုံးကွဲပြားခြားနားပါက၊ အကယ်၍ ကမ္ဘာကြီးမရှိလျှင်လူသားများသည်မတည်ရှိနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ကမ္ဘာမြေသည်အခြားအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အခြားပတ်လမ်းတစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိအခြေအနေများကလူ့အသက်ကိုခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ အချို့က၎င်းကိုနတ်မင်းကြီးတိုက်ဆိုင်မှုဟုယူဆကြသည်။ အခြားသူများကမူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ကိုအသိဉာဏ်ရှိဖန်ဆင်းရှင်မှစီစဉ်ထားကြောင်းရှင်းပြရန် ပို၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။
Leben မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးသောဓာတုကုန်ကြမ်းများနှင့်ဓာတ်ပြုမှုများအပေါ်အခြေခံသည်။ အချို့ကဘဝကိုအသိဉာဏ်ရှိစေသောဟုယူဆကြသည်; အခြားသူများကဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုစဉ်းစားပါ။ အချို့ကသိပ္ပံပညာသည်တစ်နေ့တွင်ဘုရားသခင်မရှိဘဲအသက်၏မူလအစဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်လူများစွာအတွက်မူဘ ၀ တည်ရှိခြင်းသည်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လူသား Self- ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိပါတယ်။ သူသည်စကြာ ၀ universeာကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ဘဝအဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားသည်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအစားအစာ၏တည်ရှိမှုကိုညွှန်ပြ; ဤရေငတ်ခြင်းကိုအငတ်ပြေစေနိုင်သောအရာရှိသည်ဟုရေငတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးတောင့်တမှုသည်အဓိပ္ပာယ်သည်အမှန်တကယ်တည်ရှိပြီးတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုဆိုလိုပါသလော။ လူအများကဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
အမှားအမှန်သည်ထင်မြင်ချက် (သို့) လူများစု၏ထင်မြင်ယူဆချက်အရမျှသာလား၊ သို့မဟုတ်လူသားတို့၏အထက်တွင်အကောင်းနှင့်အဆိုးဟုယူဆသောအခွင့်အာဏာရှိပါသလား။ ဘုရားသခင်မရှိလျှင်လူသည်မကောင်းမှုကိုဘာမျှမခေါ်ရန်၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုနှင့်အလားတူရက်စက်ယုတ်မာမှုများအားပြစ်တင်ရှုတ်ချစရာအကြောင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်မကောင်းမှုတည်ရှိမှုသည်ဘုရားသခင်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ အကယ်၍ ၎င်းမရှိပါကသန့်ရှင်းသောစွမ်းအားသည်အုပ်ချုပ်ရမည်။ အကြောင်းပြချက်သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုမျိုးလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးနိုင်သည်ထက် ပို၍ ကြီးသည်။ အကယ်၍ သူသည်စကြာ ၀ createdာကိုဖန်တီးခဲ့ပါကသူသည်စကြာ ၀ thanာထက်ကြီးမားသည်။ အချိန်၊ နေရာ၊ အရာဝတ္ထုနှင့်စွမ်းအင်တို့မတည်ရှိမီအချိန်၊
2. တိမောသေ 1,9 “အချိန်မတိုင်မှီ” ဘုရားသခင်ပြုခဲ့သော အရာတစ်ခုအကြောင်း ပြောပါသည်။ အချိန်သည် အစပြုခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်သည် ယခင်က တည်ရှိခဲ့သည်။ သူ့မှာ နှစ်တွေနဲ့ တိုင်းတာလို့မရတဲ့ အချိန်မကုန်နိုင်တဲ့ တည်ရှိမှုရှိတယ်။ ၎င်းသည် ထာဝရ၊ အနန္တအရွယ်ဖြစ်သည်- အနန္တနှင့် ဘီလီယံပေါင်းများစွာသည် အဆုံးမရှိဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ချာသည် ဘုရားသခင်၏ဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြရန် ကန့်သတ်ချက်သို့ရောက်သည်။
ဘုရားသခင်ကအရာဝတ္ထုကိုဖန်တီးပြီးကတည်းကသူဟာအရာဝတ္ထုမတိုင်မီကတည်ရှိပြီးရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ၀ ိညာဉ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကို ၀ ိညာဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်လုံးဝဖန်ဆင်းခြင်းခံရသည်မဟုတ်၊ ၎င်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ဝိညာဉ်တစ်လုံးအဖြစ်တည်ရှိသည်။ သူသည်ဖြစ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်သည်၊ သူသည် ၀ ိညာဉ်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်တည်ရှိမှုသည် အရာဝတ္ထု၏နောက်သို့ပြန်သွားကာ အရာဝတ္ထု၏အတိုင်းအတာနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများသည် သူ့အတွက်မသက်ဆိုင်ပါ။ မိုင်နဲ့ ကီလိုဝပ်နဲ့ တိုင်းတာလို့ မရဘူး။ ရှောလမုန်သည် အမြင့်ဆုံးကောင်းကင်များပင် ဘုရားသခင်ကို နားမလည်နိုင်ဟု ဝန်ခံခဲ့သည်။1. ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် 8,27) ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ပြည့်စေတော်မူသည် (ယေရမိ ၂3,24); နေရာတိုင်းမှာ ရှိတယ်၊ အစုံရှိတယ်။ မရှိသော စကြဝဠာတွင် နေရာမရှိပါ။
ဘုရားသခင်သည် မည်မျှ တန်ခိုးကြီးသနည်း။ အကယ်၍ သူသည် DNA ကုဒ်များကို ဖန်တီးနိုင်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆိုလာစနစ်များကို ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဆိုပါက၊ သူသည် ဤပါဝါအဆင့်အားလုံးတွင် "အရည်အချင်း" ရှိပါက၊ သူ၏ အကြမ်းဖက်မှုသည် အမှန်တကယ် အကန့်အသတ်မရှိ ဖြစ်ရမည်၊ ထို့နောက်တွင် သူသည် အလုံးစုံသော စွမ်းအားဖြစ်ရပါမည်။ “ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုတော့ ဘယ်အရာမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး” လို့ လုကာ ပြောတယ်။ 1,37. ဘုရားသခင်သည် သူအလိုရှိသမျှကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဘုရားသခင်၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုပ်ကိုင်မှုထက် ကျော်လွန်သော အသိဥာဏ်တစ်ခု ရှိပါသည်။ စကြဝဠာကြီးကို အုပ်စိုးပြီး စက္ကန့်တိုင်း တည်ရှိနေမှာ သေချာတယ် (ဟေဗြဲ 1,3) ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို သိရှိရန် လိုအပ်သည်။ သူ၏ ဉာဏ်ပညာသည် အကန့်အသတ်မရှိ- သူသည် သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိသူဖြစ်သည်။ သူသိချင်တာ၊ သိတာ၊ အတွေ့အကြုံ၊ သိတာ၊ အသိအမှတ်ပြုတာ၊ ကြုံတာတွေ အားလုံးကို လိုချင်တယ်။
ဘုရားသခင်သည် အမှားအမှန်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသောကြောင့်၊ သူသည် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အားဖြင့် မှန်သည်ဖြစ်၍ မှန်သောအရာကို အမြဲပြုလုပ်ရန် တန်ခိုးရှိသည်။ “အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ဒုစရိုက်ကိုပြုရန် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို မပြုနိုင်။” (ယာကုပ်၊ 1,13) သူသည် လုံးဝဖြောင့်မတ်ပြီး လုံးဝဖြောင့်မတ်သည်။ (ဆာလံ၊ 11,7) သူ၏ စံနှုန်းများ မှန်ကန်သည်၊ သူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ မှန်ကန်သည်၊ သူသည် အခြေခံအားဖြင့် ကောင်း၍ မှန်ကန်သောကြောင့် လောကကို ဖြောင့်မတ်စွာ စီရင်သည်။
ဤအရာများအားလုံး၌ဘုရားသခင်သည်ငါတို့နှင့်အလွန်ကွာခြားပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်အထူးစကားလုံးများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာလျှင်နိစ္စထာဝရ၊ နိစ္စထာဝရ၊ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဖြစ်၍ ထာဝရဖြစ်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိစ္စဖြစ်သည်။ သူသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ ငါတို့သေသည်၊ သူမသေနိုင်ဘူး။ ငါတို့နှင့်ဘုရားသခင်အကြားရှိဤခြားနားချက်ကိုသူ၏ခြားနားမှု၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျော်လွန်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ထက်ကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်မတူပါ။
အခြားရှေးခေတ်ယဉ်ကျေးမှုများကအချင်းချင်းနှင့်စစ်တိုက်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စွာပြုမူခြင်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသမ္မာကျမ်းစာကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသော၊ မည်သူ့ကိုမျှမလိုအပ်၊ အခြားသူများကိုကူညီရန်သာလုပ်ဆောင်သောဘုရားသခင်ကိုဖော်ပြထားသည်။ သူသည်လုံးဝတည်ငြိမ်ပြီးသူ၏အပြုအမူသည်မျှတ။ ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်သူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အားသန့်ရှင်းသည်ဟုဆိုရာတွင်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်အညီစုံလင်ခြင်းဟုသမ္မာကျမ်းစာကဆိုလိုသည်။
ဒါကဘဝကိုအများကြီးပိုလွယ်စေသည်။ သင်တို့သည်ကွဲပြားသောဘုရားဆယ်ပါး၊ နှစ်ဆယ်တို့ကိုလုပ်ကျွေးစရာအကြောင်းမရှိ။ တစ်ယောက်တည်းရှိတယ်။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူသည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအစိုးရတော်မူ၏။ ခပ်သိမ်းသောသူတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်အားလုံးကိုတစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၊
ဘုရားသခင်ကသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အကန့်အသတ်မဲ့တန်ခိုးရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သာသိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူးထောက်နာခြင်း၊ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်သူ၏သဘောသဘာဝနောက်တစ်ခုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးသောဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကရုဏာနှင့်ကောင်းမြတ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
တပည့်တစ်ဦးသည် ယေရှုအား “သခင်၊ ခမည်းတော်အား ပြတော်မူပါ” ဟု ယေရှုကို မေးခဲ့သည် (ယော၊ ၁4,8) ဘုရားသခင်က ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ သူသိချင်တယ်။ ယေဇကျေလမြင်သော သဘာဝလွန်ပလ္လင်၊ သိနာတောင်ပေါ်ရှိ မီးလောင်နေသောချုံများ၊ မီးတိုင်နှင့် မိုးတိမ်တို့၏ ပုံပြင်များကို ယေဇကျေလမြင်ခဲ့ရသည်၊2. ကြွက် 3,4; 13,21; 1Kön ၁9,12; ယေဇကျေလ ၁)။ ဘုရားသခင်သည် ဤရုပ်ထွက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင် ပေါ်ထွန်းနိုင်သည်၊ သို့သော် သူသည် အမှန်တကယ် မည်သို့တူသနည်း။ ငါတို့က သူ့ကို ဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲ။
“ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် ခမည်းတော်ကိုမြင်၏” ဟုယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သည် (ယော၊ ၁4,9) ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် မည်သို့မည်ပုံဖြစ်သည်ကို သိလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုကို ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘာဝတရားမှ ဘုရားသခင်အား အသိပညာကို ရရှိနိုင်သည်။ ဓမ္မဟောင်း၌ မိမိကိုယ်မိမိ ထုတ်ဖော်ပြသပုံမှ ဘုရားသခင်အား နောက်ထပ်အသိပညာ၊ သို့သော် ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာအများစုသည် ယေရှု၌မိမိကိုယ်ကိုထင်ရှားပြပုံမှလာပါသည်။
ယေရှုသည် ဘုရားသခင်သဘာ၀၏ အရေးကြီးဆုံးရှုထောင့်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသသည်။ သူသည် ဧမာနွေလဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ “ငါတို့နှင့်အတူရှိသော ဘုရားသခင်” (မဿဲ 1,23) အပြစ်မရှိဘဲ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုမရှိဘဲ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ကိုယ်ချင်းစာတရားက သူ့ကို စိမ့်ဝင်နေတယ်။ သူသည် အချစ်နှင့် ပျော်ရွှင်မှု၊ စိတ်ပျက်မှုနှင့် ဒေါသကို ခံစားရသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကို ဂရုစိုက်တယ်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို တောင်းဆိုပြီး အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်သည်။ သူသည် ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် အနစ်နာခံကာ သေဆုံးသည်အထိ အခြားသူများကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်။ မောရှေအား သူကိုယ်တိုင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့သည်– “သခင်၊ သခင်၊ ဘုရားသခင်၊ သနားစုံမက်ဖွယ်ကောင်း၍ စိတ်ရှည်သည်းခံ၍ ကြီးမားသောကျေးဇူးတော်နှင့် သစ္စာစောင့်သိတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျေးဇူးတော်ကို စောင့်ထိန်းကာ ဒုစရိုက်၊ လွန်ကျူးမှုနှင့် အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူသော်လည်း၊ မည်သူကိုမျှ အပြစ်မပေးဘဲ နေတော်မူ၏။ ." (2. ၃၄:၆-၇)။
ဖန်ဆင်းခြင်းထက် သာလွန်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည်လည်း ဖန်ဆင်းခြင်းအတွင်း လုပ်ဆောင်ရန် လွတ်လပ်မှုရှိသည်။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေခြင်း၊ သူသည် စကြဝဠာထက်ကြီးပြီး စကြဝဠာရှိ နေရာတိုင်းတွင် ရှိနေသော်လည်း၊ သူသည် မယုံကြည်သူများနှင့် အတူမရှိသည့်ပုံစံဖြင့် "ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ" ရှိနေပါသည်။ တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အမြဲနီးကပ်နေပါသည်။ သူသည် နီးသည်နှင့်ဝေးသည် (ယေရမိ ၂)3,23).
သခင်ယေရှုအားဖြင့် လူ့သမိုင်း၊ အာကာသနှင့် အချိန်တို့၌ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ သူသည် ဇာတိပကတိပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ လူ့ဇာတိ၌ မည်သို့သော စံနမူနာဖြစ်သင့်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသခဲ့ပြီး၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကို ဇာတိပကတိထက်သာလွန်စေလိုကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ထာဝရအသက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်ထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ ယခုသိထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သောအသက်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်အသက်တာကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်သည်- ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ကြွလာကာ ကျွန်ုပ်တို့၌ ကျိန်းဝပ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏သားမြေးဖြစ်စေသည် (ရောမ၊ 8,11; 1. ဂျိုဟန် 3,2) ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ အမြဲရှိနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီရန် အာကာသနှင့် အချိန်တို့တွင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ကြီးမြတ်။ ခွန်အားကြီးသောဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ တရားမျှတသောတရားသူကြီးမှာတစ်ချိန်တည်းတွင်သနားကြင်နာတတ်သော၊ စိတ်ရှည်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ကိုအမျက်ထွက်သောဘုရားသခင်သည်လည်းအပြစ်တရားမှကယ်တင်ခြင်းကိုပေးသည်။ သူသည်ကျေးဇူးတော်၌အလွန်ကြွယ်ဝခြင်းရှိ၏။ ၎င်းသည် DNA ကုဒ်များဖန်တီးနိုင်သောသတ္တဝါ၊ သက်တံရောင်၏အရောင်များ၊ dandelion ပန်းပွင့်များ၏အဆင်းသဏ္fromာန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်သည်ကြင်နာမှုမရှိ၊ မေတ္တာမရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုံးဝတည်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ဥပမာ၊ သူသည်ဖခင်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများဖြစ်သည်; သူကခင်ပွန်းနှင့်ငါတို့တစ် ဦး စုပေါင်းအဖြစ်သူ၏ဇနီး; သူကရှငျဘုရငျနှငျ့ကြှနျုပျတို့ကသူ့လက်အောက်ခံ; သူသည်သိုးထိန်းဖြစ်၏။ ဤဘာသာဗေဒဆိုင်ရာပုံရိပ်များသည်တူညီသည်မှာဘုရားသခင်သည်မိမိလူမျိုးကိုကာကွယ်ကာမိမိလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ငါတို့မည်မျှသေးငယ်သည်ကိုဘုရားသခင်သိသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်သုတ်သင်နိုင်သည့်အပြင်စကြာဝicာအင်အားအနည်းငယ်တွက်ချက်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသုတ်သင်နိုင်ကြောင်းသိသည်။ သို့သော်သခင်ယေရှု၌ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်မျှချစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်မျှဂရုစိုက်ကြောင်းပြသခြင်းကိုဘုရားသခင်သည်ပြသသည်။ ငါတို့ကိုကူညီရင်တောင်မှဆင်းရဲဒုက္ခခံဖို့ယေရှုနှိမ့်ချခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသည့်နာကျင်မှုကိုသူသိသည်။ သူသည်မကောင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် ၀ မ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုသူသိပြီးဘုရားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သူ၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အစီအစဉ်များရှိသည်။1. ကြွက် 1,27) ကိုယ်တော်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့အား တောင်းဆိုသည်– ကရုဏာဖြင့်၊ သခင်ယေရှု၌ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့အား အတုယူသင့်သည်၊ နှိမ့်ချမှု၊ ကိုယ်ကျိုးမဖက်သော အမှုတော်ဆောင်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကရုဏာ၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ချက်၏ ဥပမာတစ်ခု ပေးထားသည်။
"ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏" ဟု Johannes က ရေးသားခဲ့သည်။1. ဂျိုဟန် 4,8) ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် အသေခံရန် သခင်ယေရှုကို စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဘုရားသခင်ကြားရှိ အတားအဆီးများ ပြိုလဲနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ထာဝရပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် စိတ်ကူးယဉ်တွေးခေါ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
သခင်ယေရှု၏ကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းမှဘုရားသခင်ထမြောက်တော်မူသည်ကိုသခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းမှရရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားနာကျင်မှုဝေဒနာခံရန်အသင့်ရှိကြောင်းပြသသည်။ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာခေါ်ဆို သူကသူ့အလိုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအတင်းအကျပ်မပြုပါ။
ယေရှုခရစ်၌ အရှင်းလင်းဆုံးဖော်ပြသည့် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာဖြစ်သည်– “ဒါက ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲ၊ ဘုရားသခင်က ငါတို့ကိုချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ၊ ငါတို့ကိုချစ်ပြီး ငါတို့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက် အပြစ်ဖြေဖို့ သားတော်ကို စေလွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ ချစ်သူတို့၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ဤမျှလောက်ချစ်တော်မူလျှင်၊1. ဂျိုဟန် 4,10စာ-၁၁)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌နေထိုင်ပါက ထာဝရအသက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သာမက ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများအတွက်ပါ ရွှင်လန်းစရာဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို အသက်တာတွင် လိုက်လျှောက်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သေခြင်း၌ နောက်မှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ လိုက်ကြလိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေသော တစ်ခုတည်းသော ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ထမြောက်စေပြီး ထာဝရအသက်ကို ပေးလိမ့်မည် (ရောမ 8,11) သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ချစ်တတ်ရန် မသင်ယူပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ထာဝရအသက်ကို ခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိရှေ့မှောက်တွင် ကိုင်ဆောင်ထားသည့် စံပြစံနမူနာတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တတ်စေရန် သွန်သင်ပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့၌ လုပ်ဆောင်နေသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးကို ပြောင်းလဲစေသည်။ နေ၏နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများကို အုပ်စိုးသော စွမ်းအားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားထဲတွင် မေတ္တာဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ချစ်ခင်မှုကို အနိုင်ယူသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သစ္စာစောင့်သိမှုကို အနိုင်ယူသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်တာ၌ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော၊ ဘဝဦးတည်ချက်၊ ထာဝရအသက်မျှော်လင့်ချက်ကို ပေးသည်။ ကောင်းမှုပြုဖို့ ဒုက္ခရောက်ရရင်တောင် သူ့ကို ယုံကြည်နိုင်တယ်။ ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ကောင်း​မြတ်​ခြင်း​၏​နောက်​ကွယ်​၌ တန်ခိုး​တော်​ရှိ​၏။ မေတ္တာတော်ကို ဉာဏ်ပညာဖြင့် လမ်းညွှန်တော်မူ၏။ စကြဝဠာ၏ စွမ်းအားများအားလုံးသည် သူ၏အမိန့်တော်အတိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အကျိုးအတွက် အသုံးပြုသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူတို့အတွက် အရာခပ်သိမ်းသည် အကောင်းဆုံးအစေခံဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ... » (ရောမ၊ 8,28).
အလွန်ကြီးမြတ်။ ကြင်နာစွာ၊ ကြောက်မက်ဘွယ်၊ သူ၏ဘုန်းတော်ကိုကြည်ညိုလေးမြတ်ခြင်း၊ ကိုယ်တော့်အမှုတော်တို့ကိုချီးမွမ်းခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းကိုရိုသေလေးမြတ်ခြင်း၊ တန်ခိုးတော်ကိုလေးစားခြင်း၊ စုံလင်ခြင်းအတွက်နောင်တယူခြင်း၊ ကိုယ်တော်၏သမ္မာတရားနှင့်ဥာဏ်ပညာ၌တွေ့ရှိရသောအခွင့်အာဏာကိုလက်အောက်ခံခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ကရုဏာကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်တုံ့ပြန်ကြသည်။ သစ္စာရှိမှုနှင့်အတူသူ၏ကျေးဇူးတော်အပေါ်သို့; ငါတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကရုဏာတော်ကို၎င်း၊ ငါတို့ကသူ့ကိုကြည်ညိုလေးစားတယ်၊ ငါတို့ကိုပိုချစ်မြတ်နိုးတယ်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသခဲ့သည်နည်းတူကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောလူများကိုလည်းချစ်ရန်သူ၏ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှု၏စံနမူနာအတိုင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
ငါတို့ဆုတောင်းသမျှသည်ဘုရားသခင် ဖြစ်၍၊ စကားအလုံးစုံတို့ကိုဘုရားသခင်သည်နား ထောင်၍၊ ခပ်သိမ်းသောအကြံအစည်တို့ကိုသိတော်မူ၏။ ငါတို့လိုအပ်သည်ကိုသိတော်မူ၏။ ငါတို့ခံစားချက်များကိုဂရုပြုတော်မူ။ ၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆန္ဒတိုင်းနှင့်၎င်းကိုမလုပ်မိရန်ဉာဏ်ပညာပေးသနားတော်မူသည်။ ယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်သည်သစ္စာရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲဝတ်ပြုရန်တည်ရှိသည်။ သူ၏တန်ခိုးတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌အမြဲအသုံးပြုသည်။ ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်တန်ခိုးတော်အားဖြင့်ချစ်တော်မူ၏။ အရာရာကိုကိုယ်တော်အားကျွန်ုပ်တို့လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။